IceCure Medical waxay heshiis qaybin bilow ah la gashay Mobile SCANMED Systems SP. z oo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » IceCure Medical waxay heshiis qaybin bilow ah la gashay Mobile SCANMED Systems SP. z oo
IceCure Medical Ltd., horumariyaha jiilka soo socda ee tignoolajiyada ugu yar ee kicinta ee burburinta burooyinka iyadoo la qaboojinayo, ayaa maanta ku dhawaaqday inay heshiis qaybin bilow ah la gashay Mobile SCANMED Systems SP. z oo si gaar ah loogu iibiyo Nidaamka Cryoablation ee Shirkadda ProSense™ iyo waxyaabaha la iska tuuro ee Poland. Laba iyo toban bilood gudahood marka la saxiixo heshiiska qaybinta bilawga ah, dhinacyadu waxay filayaan inay galaan heshiis qaybin gaar ah oo muddo dheer ah.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno heshiiska bilowga ah ee Mobilada SCANMED Mobile -ka si loogu qaybiyo Nidaamkayaga Xakamaynta ProSense ee Poland, annagoo ballaarineyna gaarsiintayada Midowga Yurub (“ EU ”), halkaas oo nidaamkayaga hadda lagu ansixiyay calaamadda CE. Heshiiskani waxa uu dhisayaa isku xidhka qaybinta ee aanu dhisnay sanadkii la soo dhaafay waana qayb ka mid ah himiladeena ah in aan tignoolajiyadan gaadhsiino dhamaan juqraafiga,” ayuu yidhi Eyal Shamir, madaxa fulinta ee IceCure. "Nidaamka daryeelka caafimaadka Polish waxaa loo yaqaanaa bixinta daaweynta kansarka horumarsan iyo qaadashada daawaynta iyo teknoolojiyadda cusub. Maaddaama kansarka naasuhu uu weli yahay mid ka mid ah noocyada ugu badan ee kansarka ee haweenka Polish, iyada oo la soo sheegay 24,644 haween ah oo la helay 20201, Poland ayaa ku biirtay dadaalka caalamiga ah ee lagu kordhinayo baaritaanka kansarka naasaha si loo baaro loona daweeyo bukaannada marxaladihii hore. Waxaan aaminsanahay in ololahan uu si fiican ugu habboon yahay awoodda nidaamkayaga ee daaweynta bukaannada goor hore iyo qalliin la'aan iyadoo la burburinayo burooyinka halista ah. Intaa waxaa dheer, teknolojiyadeena waxay sidoo kale bixisaa beddel aan yareyn oo qalliin loogu talagalay daaweynta kansarka ee xubnaha kale, oo ay ku jiraan kelyaha, sambabka, iyo lafta. ”
Kooxda Mobile SCANMED Systems waxay sii wadaan inay fuliyaan hadafkeenna si ay u siiyaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee Poland helitaanka ugu wanaagsan iyo teknolojiyadda caafimaad ee ugu dambeysay adduunka oo dhan. Heshiiska maanta wuxuu u keeni doonaa tikniyoolajiyadda hal -abuurka cusub ee ProSense Cryoablation System bukaannada kansarka naasaha ee Poland oo dhan. Nidaamka Cryoablation ProSense wuxuu awood u leeyahay inuu burburiyo burooyinka si badbaado leh, degdeg ah, iyo xanuun la'aan, iyada oo aan loo baahnayn qalliin," ayuu yiri Marcin Weksler, Madaxa Fulinta ee Nidaamyada SCANMED Mobile.
Sida ku cad shuruudaha heshiiska qaybinta bilawga ah, Nidaamyada SCANMED Mobile ayaa mas'uul ka ah inay wax ka qabtaan dhammaan shuruudaha iibinta Nidaamka Cryoablation ProSense ee Poland. Nidaamyada SCANMED ee moobiilka ayaa laga yaabaa inay kaliya ku iibiyaan Poland alaabada Nidaamka Cryoblation ProSense iyo agabka laga soo iibsaday IceCure. Marka la saxiixo heshiiska qaybinta hore, Mobile SCANMED Systems ayaa sidoo kale bixin doona amar iibsi bilow ah oo qiimihiisu yahay qiyaastii $ 100,000.